နယူးယောက်မြို့မှာ Music Video ရိုက်ကူးနေတဲ့ အိမ့်ချစ် - Zeekwat Hot News
နယူးယောက်မြို့မှာ Music Video ရိုက်ကူးနေတဲ့ အိမ့်ချစ်
July 5, 20190163
တေးဂီတလောကရဲ့ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်များကို များစွာ ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှုနဲ့အတူ လူကြီးလူငယ်ပရိသတ်များကြား အလွန်ရေပန်းစားတဲ့ အဆိုတော်မလေး အိမ့်ချစ်ဟာ သူမတူတဲ့ အသံပါဝါရှိသူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့သံစဉ်သီချင်းများက နားဆင်သူများကို ချိုမြိန်စေခဲ့ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်က လက်ရှိမှာ နယူးယောက်ကို ရောက်ရှိနေပြီး ‘ထာဝရအတွက်ချစ်သွားမယ်’ ဆိုတဲ့ Music Video လေးကို ရိုက်ကူးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo : Eint Chit
Music Video ရိုက်ကွင်းက အမှတ်တရပုံရိပ်များကို မျှဝေရင်း သီချင်းစာသားလေး နှစ်ကြောင်းကိုလည်း သီဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။
“မင်းစိတ်ညစ်နေလားကွာ… အနားနားမှာ ငါလေနေပေးထားတာ… Music Video Shooting in NY…!! #ထာဝရအတွက်ချစ်သွားမယ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ဟာ ပြည်ပကို ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး Music Video အတွက်ပါ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့် ပြည်ပခရီးစဉ်လေးက အချိန်ကြာမြင့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောကပဲ အိမ့်ချစ်က ကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံ LA Concert ရှိုးပွဲကြီးအတွက် သီဆိုဖျော်ဖြေပြီးခဲ့ပြီး ဇွန် (၂၂) ရက်နေ့မှာတော့ ဦးအောင်ရင်နဲ့ အခြားသော တေးသံရှင်များနဲ့အတူ San Francisco ကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ့်ချစ်ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူ ချစ်ကောင်းနဲ့အတူတွဲပြီး သီချင်းများသီဆိုရင်း ဂီတလောကထဲသို့ စတင်အခြေချဝင်ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ဟာ ဖခင်နဲ့အတူ 528 concert show ပွဲကြီးကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော်အခွေများကတော့ (၂၀၁၂) ခုနှစ်မှာ ‘ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ’ ဆိုတဲ့ တေးစီးရီး၊ (၂၀၁၅) ခုနှစ်မှာ ‘အချစ်ရေး’ ဆိုတဲ့ တေးစီးရီးနဲ့ (၂၀၁၆) ခုနှစ်မှာ ‘အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်’ ဆိုတဲ့ တေးစီးရီး စတဲ့ အခွေများကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Source : Eint Chit FB
တေးဂီတလောကရဲ့ အောငျမွငျမှုအသီးအပှငျ့မြားကို မြားစှာ ပိုငျဆိုငျရရှိမှုနဲ့အတူ လူကွီးလူငယျပရိသတျမြားကွား အလှနျရပေနျးစားတဲ့ အဆိုတျောမလေး အိမျ့ခဈြဟာ သူမတူတဲ့ အသံပါဝါရှိသူဖွဈပွီး သူမရဲ့သံစဉျသီခငျြးမြားက နားဆငျသူမြားကို ခြိုမွိနျစခေဲ့ပါတယျ။ အိမျ့ခဈြက လကျရှိမှာ နယူးယောကျကို ရောကျရှိနပွေီး ‘ထာဝရအတှကျခဈြသှားမယျ’ ဆိုတဲ့ Music Video လေးကို ရိုကျကူးနတော ဖွဈပါတယျ။
Music Video ရိုကျကှငျးက အမှတျတရပုံရိပျမြားကို မြှဝရေငျး သီခငျြးစာသားလေး နှဈကွောငျးကိုလညျး သီဆိုရေးသားခဲ့ပါတယျ။
“မငျးစိတျညဈနလေားကှာ… အနားနားမှာ ငါလနေပေေးထားတာ… Music Video Shooting in NY…!! #ထာဝရအတှကျခဈြသှားမယျ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ အိမျ့ခဈြဟာ ပွညျပကို ဖြျောဖွရေေးအတှကျ ရောကျရှိနတောဖွဈပွီး Music Video အတှကျပါ ဆကျလကျဆောငျရှကျနတောကွောငျ့ ပွညျပခရီးစဉျလေးက အခြိနျကွာမွငျ့နတော ဖွဈပါတယျ။
လတျတလောကပဲ အိမျ့ခဈြက ကယျလီဖိုးနီးယားနိုငျငံ LA Concert ရှိုးပှဲကွီးအတှကျ သီဆိုဖြျောဖွပွေီးခဲ့ပွီး ဇှနျ (၂၂) ရကျနမှေ့ာတော့ ဦးအောငျရငျနဲ့ အခွားသော တေးသံရှငျမြားနဲ့အတူ San Francisco ကို သှားရောကျဖြျောဖွခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အိမျ့ခဈြဟာ ဖခငျဖွဈသူ ခဈြကောငျးနဲ့အတူတှဲပွီး သီခငျြးမြားသီဆိုရငျး ဂီတလောကထဲသို့ စတငျအခွခေဝြငျရောကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အိမျ့ခဈြဟာ ဖခငျနဲ့အတူ 528 concert show ပှဲကွီးကို ကွီးကယျြခမျးနားစှာ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ တဈကိုယျတျောအခှမြေားကတော့ (၂၀၁၂) ခုနှဈမှာ ‘ကိုယျတိုငျရေးပုံတူ’ ဆိုတဲ့ တေးစီးရီး၊ (၂၀၁၅) ခုနှဈမှာ ‘အခဈြရေး’ ဆိုတဲ့ တေးစီးရီးနဲ့ (၂၀၁၆) ခုနှဈမှာ ‘အောငျမွငျမှုနောကျကှယျ’ ဆိုတဲ့ တေးစီးရီး စတဲ့ အခှမြေားကို အောငျမွငျစှာ ထုတျလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ကိုရီးယား မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်လို တနေ့ထက် တနေ့ အရမ်းလှလာတဲ့ နေခြည်ဦး
အတွဲညီညီနဲ့ အမိုက်စား Music Video Shooting ပြုလုပ်နေကြတဲ့ ဇွဲပြည့်နဲ့ အိမ့်ချစ်